Uhlalutyo lweLogitech MX Keys Mini entsha yeMac | Ndisuka kuMac
Uphononongo lweLogitech MX Keys Mini entsha yeMac
Alithandabuzeki elokuba xa sithetha ngophawu lweLogitech sithetha ngomgangatho. Kule meko siye safumana ithuba lokuvavanya i ikhibhodi entsha yeLogitek MX Keys Mini yeMac kwaye singaqhubela phambili ngokugqibeleleyo ukuba sijongene nenye yezitshixo zibalaseleyo zefem kubasebenzisi beMac.Le yikhibhodi esemgangathweni ebalaseleyo eyongeza ukukhanya okukrelekrele kwizitshixo ngokubhaqa xa sisondela ngesandla, le keyboard yeLogitech.
Thenga i-MX Keys Mini yakho apha
1 Zininzi izinto ezintsha ezongezwa yile MX Keys mini
2 Ifumaneka ngemibala emine
3 Ezinye zezinto zayo eziphambili ziquka ukutshaja ngokukhawuleza
4 Uyilo kunye nomgangatho we-MX Keys Mini imathiriyeli
Zininzi izinto ezintsha ezongezwa yile MX Keys mini
Kwaye kukuba inkampani ithatha ithuba lamava afunyenwe kwiminyaka emininzi kangaka ukuyila ikhibhodi ebukekayo ngokwenyani ngokwendlela yokusebenza ngaphandle kobungakanani bayo buncinci. Kungenxa yoko le nto isitayile esomeleleyo sothotho lweLogitech MX siyenza enye yezona zikhibhodi zibalaseleyo ezingenamanani namhlanje. Abo bafuna iphedi yamanani banokukhetha imodeli ye-MX eqhelekileyo ye-Mac okanye eyona icetyiswa kakhulu. Logitech Craft.
Kunokuthiwa uthotho lweMX ngomnye wabaphumeleleyo ngandlela zonke ngaphakathi koluhlu lwemveliso yeLogitech. Izigidi zabasebenzisi banazo ezi bhodibhodi kwaye bazisebenzisa yonke imihla kwiMac yabo, i-iPad, i-iPhone okanye iPC, into efunyenwe yifemu ngomsebenzi, umgangatho kunye nomsebenzi olungileyo kwezi peripherals zibalulekileyo.
Ifumaneka ngemibala emine
Igraphite, ingwevu ekhanyayo, epinki kunye nesilivere yimibala ekhoyo yale bhodi incinci yeLogitech MX Keys Mini. Ingqondo yokubona le mibala idibanisa ngokugqibeleleyo kunye noluhlu lweempuku zeMX iLogitech inazo kwikhathalogu yemveliso.
Kwimeko yethu, umbala ungwevu kwaye udibanisa kakuhle nombala weMacBook Pro njengoko ubona kwimifanekiso. Beka phezulu kwaye usebenze njengemowudi yokuthelekisa njengoko unokubona kumfanekiso ongentla, le MX Keys Mini ilingana nekhibhodi yale MacBook Pro ukusuka ngo-2009 kwaye umbala wayo ufana kakhulu.
Eli lelona xabiso lilungileyo le-MX Keys Mini entsha
Ezinye zezinto zayo eziphambili ziquka ukutshaja ngokukhawuleza
Eyona nto ilungileyo ngolu hlobo lwekhibhodi ye-Logitech kukuba yenzelwe ukuba isetyenziswe kwi-Mac, ngoko bongeza nganye yezitshixo esizidingayo ukuze zisetyenziswe. Eli candelo leenkcukacha ezingundoqo liza kuba banzi kwaye liyibhodi yebhodi epheleleyo.
Inqaku elibalulekileyo ngamaqhosha 1,2 kunye no-3 asebenza nawo tshintsha uqhagamshelwano lweBluetooth phakathi kwezixhobo, ke ngaphandle kokuchukumisa ngaphezu kweqhosha uya kubhala ukusuka kwiMac ukuya kwi-iPad okanye kwi-iPhone. Oku kwandisa kakhulu imveliso ngale keyboard kwaye luphawu oluphambili lweekhibhodi zeLogitech.
Enye inqaku emazithathelwe ingqalelo zizitshixo ezinemilo engqukuva ukuba Zibonisa ngokugqibeleleyo imilo yeminwe kwaye zikhululekile ngakumbi ukusebenzisa kunezitshixo ezisicaba ezifunyenwe kwezinye izitshixo. Sikwanazo nezitshixo ezithile zokubizelwa ngelizwi, vula imowudi yesandi kunye nesandi se-microphone kunye neqhosha le-Emojis kwindawo ephakathi efanayo. Ngokusengqiqweni inezitshixo zeMac.
Ukutshaja ngokukhawuleza ngezibuko le-USB C yenye yezinto ezintsha zale keyboard. Inebhetri ekuvumela ukuba ukonwabele ezinye Malunga neentsuku ezili-10 ngentlawulo epheleleyo okanye malunga neenyanga ezi-5 kunye nesibane sangasemva sicinyiwe. Oku kunokwahluka ngokwengqiqo ngokuxhomekeke kwindlela osebenzisa ngayo ikhibhodi, kodwa thina kuvavanyo lwethu siphumelele ukuzimela malunga neentsuku ezili-11 ngaphandle kweengxaki, ngayo yonke into esebenzayo kunye nokusetyenziswa kakhulu. engaqhelekanga kubasebenzisi abaqhelekileyo. Njengoko iinyanga kunye nokusetyenziswa zihamba, ibhetri inokuphelelwa ngandlel 'ithile kwaye ixesha lokuyisebenzisa linokuhla, kodwa ayisiyonto eyenzekayo ngexesha elifutshane ...
Ungenza ngokusesikweni amaqhosha e-F ngemisebenzi ethile okanye iindlela ezimfutshane zesiko kunye nokukhanya kwebhodi yezitshixo ngokuzenzekelayo kuxhomekeke ekukhanyeni. Ngaloo ndlela, ukulawula ukukhanya kubalulekile njengoko kunciphisa kakhulu ukusetyenziswa.
Uyilo kunye nomgangatho we-MX Keys Mini imathiriyeli
Ubume bale keyboard bufana kakhulu nomntakwabo omdala, ukuba akufani. Sinezitshixo ezimhlophe kule meko ukuba zigqame kakhulu. Uyilo lulumke kakhulu kwaye injongo yale keyboard hlala kwindawo encinci ngeyona ndlela iphezulu yokusebenza kunye nentuthuzelo efunyenweyo ne. ILogitech ithathele ingqalelo zonke iinkcukacha kwaye kule keyboard ungade uyisuse ibhetri eyiphetheyo ukuyitshintsha ibentsha xa isilela. Asicebisi ukuvula icandelo lebhetri ukuba akukho mfuneko.
Inxalenye engaphambili icocekile kwaye iyasebenza, uLogitech uyayazi indlela yokwenza iikhibhodi ngoyilo olunononophelo ngaphandle kokuncama imveliso. Kule meko, i-MX Keys Mini ye-Mac ihlangabezana nokulindelweyo kwekhibhodi elungiselelwe iintsuku zokusebenza ezinde. Intambo yokutshaja ye-USB C yongezwa kuwo omabini amazibuko kodwa itshaja ayongezwanga. Ngengqiqo ukutshaja ngokukhawuleza iadaptha yamandla exhasa iPD iyafuneka.
Ungafumana lonke ulwazi malunga nale keyboard kwi Indawo yeLogitech.
ILogitech MX Keys Mini yeMac
Isibane esizitshixo esizenzekelayo
Uyilo kunye nomgangatho wezinto
Ikhibhodi ekhululekile kakhulu xa uchwetheza iiyure
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Uphononongo lweLogitech MX Keys Mini entsha yeMac
Ikota yeBrutal yeApple kunye nokuthengiswa kweeMacs